Ostreliya Chinatown ngoku ixhasa ulwimi lwakho eAustralia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Kulapho ke luhlala khona usapho lwam eMelbourne!Phatha umdlalo ekude njengomdlalo wakho wasekhaya kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Town News Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba Ostreliya Chinatown ngoku ixhasa ulwimi lwakho eAustralia ChinaTown News Chinese Chinese News-NEWS.CHINA.COM.AU Kulapho ke luhlala khona usapho lwam eMelbourne!Phatha umdlalo ekude njengomdlalo wakho wasekhaya kwaye uphathe ilizwe langaphandle njengelizwe lakho.Ostreliya Chinatown-China Ostreliya Net China Town News Australia Chinatown; Uluntu lwase-Australia lwaseTshayina kunye neendaba eziphambili zeendaba
I-Australia Chinatown ngoku ixhasa ulwimi lwakho
Amanqaku amaninzi acinyiweyo
Umthengi oyimfihlakalo uthengisa ngaphezulu kwe-1 yezigidigidi zase-Australia, isiTshayina esincinci sithatha isitshixo
Umfazi wase-Australia wayenengxowa ende emlenzeni.Ugqirha wathi kulungile.Kwathi emva konyaka, wafunyaniswa ukuba wayenomhlaza ongapheliyo ...
Iityhefu ezibulalayo zahlasela i-Australia kwakhona, kwaye imilenze yomfazi wase-Australia yapheliswa kwaye inegazi! Isigulana sife ngaphakathi kweentsuku ezi-4! I-Australia iba yindawo esulelekileyo
Ubhubhane omtsha kwisityalo sobisi! Kukho ubukho be-60% yamaza wesithathu eMelbourne! Emva koko ulawulo olubi kakhulu luqala!
Ishishini lokutyala i-Australia lifuna ngokungxamisekileyo abavuni ngomvuzo weveki phantse i-XNUMX kodwa abantu abonelanga bayagaywa